Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ọbịa ọbịa » Ndepụta nke Akwụkwọ na -akpali akpali nke ukwuu iji nyere gị aka ito eto
Akwụkwọ nwere amamihe siri ike, na -agbanwe agbanwe nke nwere ike ịgbanwe ọnọdụ ndụ gị niile. Nke a na -aga maka ahụike, akụnụba, mmekọrịta, yana ihe ọ bụla ọzọ kacha mkpa.
Iji nọgide na -eto ma na -agbanwe kwa ụbọchị, gụọ naanị peeji iri abụọ nke nnukwu akwụkwọ! ROI dị ezigbo mkpa.
Nke a bụ ụfọdụ akwụkwọ na -akpali akpali iji nyere gị aka ito eto.
Ọzọkwa, enwere ndụmọdụ iji nweta uru kachasị na ibe ọ bụla ị gbanyere.
Ọgwụ nke Mkpali
Ọbụnadị ndị ọchụnta ego nwere nnukwu agụụ maara: mkpali na -adịte aka, ọ nweghịkwa mgbe ọ ga -adị gị ka ị ga -agwa ya n'oge kwesịrị ekwesị. Site n'ịgụ otu ibe ma ọ bụ abụọ nke akwụkwọ na -akpali akpali, ị ga -enweta ahụ iru ala nke ịkwesịrị ịmalite.
"Omume 7 nke ndị nwere oke ọrụ nke Stephen R. Covey bụ nnukwu akwụkwọ iji nyere gị aka inwe mmetụta na -abawanye uru na mkpali, "kwuru Mary Berry, Onye guzobere na onye isi of Cosmos Vita. “Ọ na -etinye ngwaọrụ iji nweta nsonaazụ achọrọ ka ọ na -ekwusi ike mkpa ileba anya n'ihe na -arụpụta nsonaazụ ekwupụtara. Ọzọkwa, ọ na-emetụta akụkụ nke nnwere onwe na njide onwe onye, ​​ịdabere na ibe ya na ịrụ ọrụ na ndị ọzọ, yana nkwalite na-aga n'ihu. Akwụkwọ a ga -enyere gị aka ịghọta akụkụ niile bara uru ịchọrọ ịtụle mgbe ị na -eru ebumnuche gị. ”
Mkpali, ịdọ aka na ntị, ezigbo agwa - gịnị ọzọ ka ị ga -eme nke ọma?
Nweta onye nkuzi kachasị ukwuu na ndụ, mana nnukwu akwụkwọ nwere ike inyere gị aka ịghọta ihe n'ọkwa miri emi ma mee ọmarịcha ihe n'oge dị mkpa.
"Essentialism: Nchụso a na -adọ aka na ntị nke ịga nke ọma site na Greg McKeown na -agbada ihe niile ruo ihe ndị dị mkpa, "kwuru Jared Pobre, onye isi na onye rụpụtara ya of Caldera + ụlọ nyocha. “A bịa na njikwa oge, ọ bụghị maka iweda ihe niile ala. Ọ bụ maka ime ihe ndị ziri ezi. Ịhọrọ nhọrọ karịa ebe anyị na -etinye ume anyị na -enyere anyị aka ilekwasị anya n'ihe kacha mkpa. ”
Mụta na ndụ n'ezie, mana tinyekwa ihe mmụta sitere n'akwụkwọ iji bulie ihe ịga nke ọma.
Ịdị ndụ nke Legends
Mgbe ị na -agụ akwụkwọ, ị na -abanye n'uche na echiche nke ụfọdụ ndị na -eche echiche n'ụwa. Kedu onye nwere ike hapụ ohere dị ka nke a, na nnukwu ego?
"Jonathan Franzen bụ otu n'ime ndị ode akwụkwọ dị ndụ," kwuru Jorgen Vig Knudstorp, Onye isi oche of Brandtù LEGO Brand. "Akwụkwọ ọhụrụ ya bụ nchịkọta akụkọ na -enweghị akụkọ nke, n'etiti ihe ndị ọzọ, na -arụ ụka maka ịgụ na ide edemede, nke dị iche na ozi ngwa ngwa, akwụkwọ mgbasa ozi mmekọrịta, na isi akụkọ akụkọ dị nkenke."
Franzen bụ otu n'ime ọtụtụ! Họrọ onye edemede na -amasị gị ma dọwaa akwụkwọ akụkọ ha niile ka ị nweta nkọwa zuru ezu.
Nnyocha ebe obibi
Ugboro ole ka anyị na -enyocha omume na akparamagwa anyị? Ụfọdụ akwụkwọ chọrọ ka anyị leba anya n'omume anyị ogologo ma mee mgbanwe ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
“Otu n'ime akwụkwọ na -akpali akpali m gụtụrụla bụ Ike nke omume, ihe kpatara anyị ji eme ihe anyị na -eme na ndụ na azụmaahịa, nke Charles Duhigg, "kwuru Ashley Laffin, onye isi njikwa njikwa akara at Nne unyi. "Ọ bụ nnukwu akwụkwọ nke nwere ike ime ka ị nwekwuo ọfụma na ume gbasara ọrụ gị. Akwụkwọ a na -ekpuchi vetikal dị iche iche, site na egwuregwu ruo na nnukwu azụmaahịa DTC ruo mmegharị ma na -eleba anya na sayensị n'azụ omume. Ọ na -abanye n'ime ihe kpatara ụmụ mmadụ ji eme nke ọma ma na -akọwakwa otu esi emebi ma ọ bụ gbanwee omume. "
Kwa ụbọchị anyị na -ebi nwere agwa, ahụike ma ọ bụ ihe ọzọ - were akwụkwọ a kpọrọ ihe!
Nkuzi na Mkpebi
Agaghị enwe ọtụtụ nzaghachi dị mma mgbe niile ịmalite azụmahịa ma ọ bụ ịchụso ebumnuche na ndụ, ọkachasị na mbido mbụ. Chọta akwụkwọ na -akwali gị ma nye gị uche dị mkpa iji nwee ihe ịga nke ọma.
“Ịgụ ihe na -atọ m ụtọ Nweta njide nke Gino Wickman na Mike Paton, "kwuru Kiran Gollakota, Onye nchoputa of Ụlọ ọgwụ Waltham. “Ọ na -akọwa etu esi ekpebisie ike dị ka onye ndu na onye ọchụnta ego mgbe ọ na -esiri ike ịhụ ọkụ na njedebe nke ọwara. Ọ kụziiri m ka m ga -esi daa ma gaa n'ihu n'agbanyeghị na ọ dị m ka enweghị isi. "
Ọ bụghị anyị niile na -enwe otu ụdị edemede na isiokwu, yabụ chọta akwụkwọ na -enwu ọkụ maka gị.
Enwere ọtụtụ puku akwụkwọ na ụdị enyemaka onwe onye, ​​ọtụtụ n'ime ha na-ekpuchi otu ala ugboro ugboro. Chọta dayamọnd ndị ahụ siri ike ma debe ha na shelf gị, n'ihi na ha nwere ike sie ezigbo ike.
“Akwụkwọ enyemaka onwe onye aghọọla ahịa juru eju, ha dị ihe dị ka otu dime iri na abụọ mana, n'ime oke osimiri nke emegharịrị emegharị na ọdịnaya onye ọchụnta ego, m jisiri ike chọta nnukwu amamihe na nduzi dị na Jamie Schmidt. Supermaker, "Kwuru Nik Sharma, onye isi of Ụdị Sharma. "Schmidt na -enye nnukwu ụlọ akụ ihe ọmụma maka nduzi maka uto azụmaahịa, akara, mmepe, ụdị azụmaahịa dị iche iche, ịba ụba, ntinye ndị ahịa na PR. Ọ bụ akwụkwọ enyemaka onwe onye na-akwụsị ụlọ ahịa nke m nwere ike itinye n'ọrụ na atụmatụ azụmaahịa m nke mechara nyere anyị aka ịgbago ngwa ngwa karịa ka anyị tụrụ anya ya. ”
Echefukwala itinye ihe ị mụtara n'akwụkwọ enyemaka onwe onye, ​​ma ọ bụghị, ọ bụ ịgụ akwụkwọ osimiri.
Ịghọta Ọgbara ọhụrụ
Kedu ihe kpatara ị ji chee na ndị isi ụlọ ọrụ na ndị isi ụlọ ọrụ na -agụ akwụkwọ ọhụrụ mgbe niile? Ọ bụ otu a ka ha si amụta maka ọnọdụ ọhụrụ, teknụzụ na -apụta, na ihe ndị ọzọ na -enye ha oke azụmaahịa.
“Achọtara m Ndị na -ahazi ọgụgụ isi ihe na -atọ ụtọ nke ukwuu yana ezigbo nkọwa nke AI - dị mkpa maka ụwa na -aga ngwa ngwa yana ịza ajụjụ gbasara omume na mpaghara a, " Andrew Penn, onye isi na onye isi njikwa at Telstra.
Ọ bụghị naanị na isiokwu ndị a na -adọrọ mmasị, mana ha ga -enyere gị aka imeri na azụmahịa.
Nghọta nke Psychology
Uche mmadụ nwere ike bụrụ isiokwu kacha atọ ụtọ, yana enwere ọtụtụ ụzọ itinye nyocha ụlọ ọgwụ na egwuregwu azụmaahịa. Gụọ na psych ka ị ghọta onwe gị na ndị ọzọ nke ọma.
Ọkà mmụta akparamaagwa Carol Dweck na -agbagha mkpa ọ dị inwe echiche ito eto n'akwụkwọ ya, Mindset: The Psychology of Success, "Kwuru Dr. Robert Applebaum, Onye nwe ya of Applebaum MD. "Ọ na -ekwu na ọ bụrụhaala na anyị anọgide na -adịgide, anyị ga na -etolite. N'ime Ime Anwansi nke Iche Iche, David J. Schwartz na -ekwu na ọ bụrụhaala na anyị kwere na onwe anyị, anyị nwere ike imeri ebumnuche ọ bụla a pụrụ ichetụ n'echiche. Akwụkwọ abụọ ahụ na -abanye n'ike nke uche na oke njikwa anyị nwere n'ezie nsonaazụ nke ndụ anyị. ”
Site n'echiche dị nkọ na echiche siri ike, kedu ka ị ga -esi tufuo ya?
Ọtụtụ ndị ọchụnta ego na-ebido njem ha na ebumnuche siri ike, mana ọ nwere ike bụrụ ihe nzuzu ka oge na-aga n'ihi nrụgide, ike ọgwụgwụ, na inwe obi abụọ. Gụọ akwụkwọ ndị na -enyere aka ịchọpụta nzube ahụ ma rapara na atụmatụ egwuregwu.
"Na nke Simon Sinek Bido n’Ihe kpatara ya: Otu Onye Isi Dị Ukwuu Na-akpali Onye Ọ Bụla Ime Ihe, ịmara ebumnuche gị bụ ihe na -eme ka azụmahịa gị na -aga n'ihu imezu ya ruo mgbe ị mechara, " Rym Selmi, Onye guzobere ya of MiiRO. “Na -enweghị 'ihe kpatara ya', azụmahịa gị ga -efunahụ ihe kpatara ya, ndị ahịa agaghịzi enwe ihe kpatara ịzụta n'aka gị. Ọkà n'akparamàgwà mmadụ bụ Angela Duckworth rụrụ ụka n'akwụkwọ ya, Grit: Ike nke Mmasị na ịnọgidesi ike, na ịnọgide na-anọgidesi ike maka ogologo oge ga-emecha mee ka ị nweta ebumnuche gị. Akwụkwọ ndị a na -enye nghọta miri emi maka mkpa ọ dị ilekwasị anya na ebumnuche gị. ”
Ọ dịghị akwụkwọ ga -ekpughere gị ebumnuche gị ozugbo, n'ezie. Nke ahụ dị gị!
Ịkwesighi ịbụ onye ọchụnta ego iji chọta uru site na ndị ochie na ụdị. Isiokwu dị ka akụ na ụba na njikwa mmekọrịta ụwa niile, yabụ bido ịgụ ụfọdụ ọkacha mmasị ụlọ akwụkwọ ochie.
"Enwere ọtụtụ akwụkwọ kpaliri m n'ime afọ niile, ọ siri ike ịkpọ aha ole na ole," ka o kwuru Aidan Cole, Onye guzobere ya of TatBrow. "Dị ka onye ọchụnta ego, Ọgaranya papa m papa m nke Robert Kiyosaki bụ nnukwu ọgụgụ. Akwụkwọ ahụ na -ekwu maka ọdịiche dị n'etiti ụgwọ na akụ, ị chọrọ n'ezie karịa akụ karịa ụgwọ. Ọzọkwa, ọ na-ekwu maka ọdịiche dị n'etiti ịbụ onye ọrụ, onye were onwe ya, onye nwe azụmaahịa na onye na-etinye ego. Akwụkwọ ọzọ mara mma bụ Otu esi emeri ndi enyi na ndi mmadu nke Dale Carnegie dere. Nke a bụ nnukwu akwụkwọ maka ndụ, ọ na -akuziri gị ihe dịka ị ga -esi nwee mmasị n'ebe ndị mmadụ nọ ka ị wee nwee ike inwe mmekọrịta na -adịte aka! "
Ndị a bụ ụdị akwụkwọ na-aga n'ihu na-enye ma kwesịkwa ọtụtụ ịgụ. Ekwela ka ha hapụ shelf gị.
Uto na Grit
Akwụkwọ na -arụ nnukwu ọrụ n'ịkọwa echiche dị mgbagwoju anya, mana ha na -enyekwa nghọta na -enye nghọta na echiche dị mfe maka nnukwu nsonaazụ. Nke ahụ bụ anwansi okwu.
"Dị ka onye ọkà n'akparamàgwà mmadụ bụ Angela Duckworth si kwuo, isi ihe na -eme ka ọ nwee ihe ịga nke ọma na -adabere na ntụpọ." Carrie Derocher, onye isi oche of TextSanity. "Akwụkwọ ya, Grit: Ike nke Mmasị na ịnọgidesi ike, na -arụ ụka na ọ bụrụhaala na ị na -anọgidesi ike ruo ogologo oge, ị ga -emecha ruo ebumnuche gị. N'akwụkwọ mkpali ya, Mindset: The Psychology of Success, Carol S. Dweck na -elekwasị anya n'echiche bụ na ịnabata echiche nke uto ga -akpali mbọ anyị n'ịnọgide na -etolite. "
Ị nwere ike ịchọta ihe ọ pụtara, mkpali, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na nnukwu akwụkwọ. Kedu ihe ị na -eche?
Ndụmọdụ Ọrụ Ime Ime
Ụfọdụ akwụkwọ na -agụ ihe dị ka akwụkwọ ntuziaka ma ọ bụ ụkpụrụ iji nweta nsonaazụ ụfọdụ. Nke a nwere ike ịbụ mgbanwe ọsọ site na ihe ị na -achọ ịgụ n'oge ohere gị, mana nsonaazụ ya nwere ike pụta ìhè.
“E wepụtara ọhụrụ Asụsụ Ahụ Dijitalụ: Otu esi ewulite ntụkwasị obi na njikọ, n'agbanyeghị agbanyeghị nke Erica Dhawan na -enyocha asụsụ ahụ n'ime ụwa dijitalụ, "kwuru Tyler Forte, Onye guzobere na onye isi of Ebe obibi Felix. “Ugbu a ọtụtụ ọfịs akwagala na gburugburu ngwakọ, nkwukọrịta dị irè adịbeghị mkpa karịa. Site na mmụba nke nzukọ ndị a na -eme nke ọma, ịmụta ịtụgharị akparamagwa nke ahụ ga -enyere gị aka isonye na ndị ọrụ gị nke ọma. "
Ọ bara uru n'ịmụta nka ọhụrụ, akwụkwọ nwere ike mee ka usoro a dị ọsọ ọsọ okpukpu iri.
Ọ bụrụ na ọ na -esiri gị ike na -anọpụ iche ma ọ bụ na ịchọrọ ịmalite mmalite na ndụ, oge eruola ịgbawa akwụkwọ na -akpali akpali. Ọ na -ewe naanị ibe ole na ole tupu ị nweta echiche dị mkpa yana ikekwe nwee obere mkpughe ma ọ bụ abụọ.
"Echiche Uto site n'aka Joshua Moore na Helen Glasgow na -abanye otu esi aga n'ihu na -achọ uto, "kwuru Eric Gist, Onye-Nchoputa of OS dị egwu. “Enwere ohere maka ito eto, anyị anaghị akwụsị ito eto. Ọ gosiri m otu m ga -esi achọ ohere ọhụrụ wee gaa n'ihu na -amụta ihe n'ọrụ m. "
Mgbe ụfọdụ, okwu ziri ezi nwere ike inyere gị aka ịpụ na ịda wee bulie elu n'oge kwesịrị ekwesị.
Akụkọ na -akpali akpali
Ọ dịghị ihe ọzọ na -akpali akpali karịa ịgụ gbasara ndị ezigbo mmadụ na nnukwu ihe ngosi ha nke imeputa ihe na imezu ya. Ọ bụghị naanị na -atọ ụtọ, mana ọ na -egosi na ị nwekwara ike ime otu ihe ahụ.
"Ngwaọrụ nke Titans: Usoro, usoro na omume nke Billionaires, akara ngosi, na ndị na-eme ọkwa klaasị. bụ nchịkọta akụkọ na -akpali akpali nke akụkọ sitere na podcaster azụmahịa a ma ama Tim Ferriss, "kwuru Joshua Tatum, Onye rụpụtara ya of Omenala Kanvas. “Akụkọ ndị a na -egosi ihe ọma, ihe ọjọọ, na ihe jọrọ njọ nke ndụ ndị ijeri ego, akara ngosi na akụkọ mgbe ochie, na -enye maapụ ụzọ ha nke ọma. Na -akpali ma na -akpali akpali, ị ga -achọ ịkọrọ ndị otu niile akụkọ ndị a. ”
Mụta otu ha siri mee ya, gbasoo nzọụkwụ ha, ma hapụ akara gị n'ụwa.
Ịga nke Ọma N'agbanyeghị ejighị n'aka
Ezigbo okwu-anyị niile na-enwe obi abụọ site n'oge ruo n'oge. N'oge ihe isi ike, anyị nwere ike irite uru n'akwụkwọ ndị na -eme ka anyị dabere ma mee ka obi sie anyị ike. Nke ahụ dị mma karịa ịnọgidesi ike na akụkọ USB!
“Ịmụta ka esi amata na iji ohere mee ihe n'oge ọgba aghara bụ ihe a na -elekwasị anya Mepụta ọdịnihu + akwụkwọ ntuziaka ọhụrụ: usoro maka echiche na -akpaghasị site na Jeremy Gutsche, "kwuru Shahzil Amin, Onye Mmekọ Mmekọrịta na Isi Obodo Karlani na Onye guzobere Emagineer na Tupu tupu. “COVID-19 gbanwere ụzọ anyị si azụ ahịa. N'oge ọrịa a, ọtụtụ ụlọ ọrụ dara n'ihi enweghị nghọta na mgbanwe. Ma ndị ọzọ na -eme nke ọma site n'iji echiche na -akpaghasị iji chọpụta mgbanwe na mkpa ndị ahịa wee malite ngwa ngwa izute ha. Nke a bụ ihe dị mkpa ịgụ akwụkwọ mgbe ọrịa gbasasịrị maka azụmaahịa na-aga n'ihu. ”
Ekwela ka ihe omume ụwa jide gị. Kwadebe site n'ịgụ akwụkwọ ndị ziri ezi na ịnakwere echiche agile.
Mmekọrịta anyị na ndị ọzọ dị oke mkpa maka ndụ obi ụtọ na ihe ịga nke ọma. Enwere ụfọdụ akwụkwọ kpochapụwo na -enyere anyị aka iwulite na jikwaa mmekọrịta nke ọma, yabụ echefula ohere ịgụ ha n'isi.
"Ọ bụrụ na ịchọrọ ka ndị mmadụ hụ gị n'anya, kwụsị ịkatọ ha, Dale Carnegie na -ekwusa n'akwụkwọ akụkọ ya, Otu esi emeri ndi enyi na ndi mmadu, "Kwuru Michael Scanlon, CMO na ngalaba-guzobere of Slọ Skincare. “Enweghị ọdịiche dị ukwuu n'etiti mmekọrịta onwe onye na mmekọrịta azụmahịa. A bịa na nka nka, ha abụọ na -eji otu ụkpụrụ. Akwụkwọ ọzọ na -agba ume bụ David J. Schwartz ', Ime Anwansi nke Iche Iche, nke na -enye ụzọ bara uru maka ịzụ onwe gị iche echiche na ịkpa agwa ka ị nweta ọchịchọ gị niile. ”
N'ezie, ị nwere ike ilele vidiyo ma ọ bụ gụọ nhota, mana ọ nweghị ihe na -adabara ahụmịhe nke ezigbo akwụkwọ.
Omume na usoro
Anyị niile bụ ihe okike. Ajụjụ a bụ - kedu agwa na -enyere gị aka ime nke ọma, oleekwa nke na -egbochi gị?
"Akwụkwọ kacha mma maka ndị isi ịgụ bụ"Omume 7 nke ndị nwere oke ọfụma"" Kwuru Jason Wong, onye isi of Doe na-ebu agha. “Akwụkwọ a na -amaba n'ime imepụta agwa kacha mma ka ị nwee ihe ịga nke ọma n'ụwa wee kewaa ya n'ime iberibe ihe ndị na -agbari agbari. Ana m akwado ya onye ọ bụla. ”
Dị ka Socrates siri kwuo, ndụ a na -enyochaghị abaghị uru ibi ndụ, yabụ bido ịgụ ma chọpụta ihe gbasara onwe gị yana otu ị ga -esi aga ụwa.
Ọ dịghị akwụkwọ kwesịrị ịbụ ederede puku peeji ka ọ dị irè ma baa uru. Ụfọdụ akwụkwọ anyị kacha amasị dị mfe ma dị mfe ịgụ ya na ozi doro anya, nke zuru ụwa ọnụ.
"Nke Paul Arden"Ọ Dịchaghị Mma, Ọ Dị Mma Ịchọrọ Ịbụ: Akwụkwọ kacha ere ere nke ụwa ” ntuziaka n'akpa uwe ka esi eme nke ọma na -enye ngwa ngwa na amamihe amamihe ị nwere ike iji na azụmaahịa na ndụ nke gị, ” ka Dr. Zachary Okhah, onye guzobere na onye isi dọkịta na -awa at PH-1 Miami. "Site na nka dị egwu, foto na eserese, ọ na-ejupụta na-atọ ụtọ. Ọ bụghị otú ahụ ka ị dị na -ekpuchi ihe niile site na echiche nzuzu na -enyere gị aka imeri ihe mgbochi echiche wee chụọ gị n'ọrụ nwere ike ịbụ ihe dị mma. Ọ bụ akwụkwọ dị mfe iji ruo peeji mgbe ịchọrọ obere nghọta.
Naanị n'ihi na akwụkwọ dị ogologo ma na -agwụ ike, apụtaghị mgbe niile na ọ dị mma! Mgbe ụfọdụ, naanị ihe ị chọrọ bụ ka ọ dị mfe.
Ezigbo Amamihe nke Ụwa
Mgbe ịchọtara otu mkpụrụ amamihe n'ime akwụkwọ nke nnukwu akwụkwọ, ọ ga -anọnyere gị ruo mgbe ebighi ebi, ọ nweghịkwa onye nwere ike iwepụ ya. Ọzọkwa, ka ị na -enwekwu amamihe, ị ga -enwe ike ịkwado ihe ịma aka ndị siri ike na ndụ.
"Na Otu esi emeri ndi enyi na ndi mmadu, otu n'ime akwụkwọ kacha ere nke oge niile, Dale Carnegie tụrụ aro ka anyị wepụ anya anyị ma gosi mmasị n'ebe ndị ọzọ nọ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ka a hụ anyị n'anya, " Haim Medine, Onye-nchoputa na onye isi okike at Mark Henry ọla. “Ndụmọdụ a metụtara ọ bụghị naanị mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ọ na -enyekwa aka n'ịzụlite mmekọrịta ndị ọkachamara. 'Ọ bụrụ na anyị kwere ya, anyị nwere ike nweta ya' bụ ozi mkpali David J. Schwartz kwuru n'akwụkwọ ya a ma ama, Ime Anwansi nke Iche Iche. Anyị nwere ike nweta ọchịchọ ahụ niile na ndụ anyị naanị site na imepụta nkwenye na -eme ka nkwenye ndị a sikwuo ike. ”
Site na ntinye akwụkwọ iri na abụọ sitere n'aka ndị isi azụmaahịa, ị nwere nnukwu nchịkọta iji rụọ ọrụ. Bugo akwụkwọ ọgụgụ gị ma ọ bụ jide ụfọdụ akwụkwọ nta-ihe ọ bụla ị na-eme, akwụsịkwala ịgụ ihe!